Izindatshana zikaKatie Karr Martech Zone |
Imibhalo nge UKatie Karr
Uyemukelwa kulokho ochwepheshe bezentengiso abakubiza nge-The Customer Experience Era. Ngo-2016, izinkampani ezingama-89% zilindele ukuncintisana ngesisekelo samakhasimende, vs 36% eminyakeni emine eyedlule. Umthombo: Gartner Njengoba ukuziphatha kwabathengi nobuchwepheshe buqhubeka nokuvela, amasu akho wokumaketha okuqukethwe kudingeka ahambisane nohambo lwamakhasimende. Okuqukethwe okuphumelelayo manje kuqhutshwa ngokuhlangenwe nakho - nini, kuphi nokuthi kanjani amakhasimende akufunayo. Okuhlangenwe nakho okuhle kuzo zonke iziteshi zokumaketha kungukuthi